ओठ फुट्ने समस्या छ ? समाधान गर्न यी ५ कारण अपनाउनुहोस « Khoj Raftar
ओठ फुट्ने समस्या छ ? समाधान गर्न यी ५ कारण अपनाउनुहोस
१४ कार्तिक । सामान्यतयाः जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ओठ फुट्ने समस्या पनि शुरु हुन्छ । जाडोको समयमा हावा सुख्खा हुने र यसको स्पर्श छालामा पर्दा छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ ।
एकै दिन ६ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणमुक्त